Mareykanka oo war ka soo saaray dhinacyadii ka maqnaa shirka Dhuusamareeb 3 | Keydmedia
Mareykanka oo war ka soo saaray dhinacyadii ka maqnaa shirka Dhuusamareeb 3
Qoraal ka soo baxay xafiiska Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in dhinacyadii ka maqnaa shirkii Dhuusamareeb ay yihiin kuwa "Qaswadayaal ah."
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay ka maqnaashaha madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ee shirka Dhuusamareeb 3, oo xalay war-murtiyeed laga soo saaray iyadoona ku tilmaamtay "Qaswadayaal."
Waxey sheegtay in ay si aad ah uga shaqeysay sidii ay shirka Dhuusamareeb isugu imaan lahaayeen dhamaan madaxda Soomaalida si ay isugu biiriyaan aragtidooda, balse ay diideen kuwa ay ku tilmaamtay "Qaswadayaal."
"Dowladda Mareykanka waxey ka shaqeysay in shirka Dhuusomareeb3 ay ku kulmaan dhamaan madaxda Soomaalida si aragtitooda ay isugu biiriyaan, laakiin Qaswadayaasha diidan iney qeyb galaan waxey u baas baxayaan Dimuquraadiyadda Soomaaliya iyagoo leh damac gooni ah" ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay US.
Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in madaxdii ka maqnaa shirka Dhuusamareeb 3 ay danahooda kaliya fiirsanayeen, balse aaney eegeynin danta guud.
Dowladda Mareykanka ayaa maalmihii dambe fariimo hanjabaad ah u soo diraysay madaxda Soomaalida, iyadoo ku cadaadineysay in shirka Dhuusamareeb la isugu wada tago, kadibna laga soo saaro go'aan doorasho oo wada ogol laga yahay, haseyeeshee ay ku guul dareysatay, shirkuna dhamaaday, iyada oo aan isku wada keenin.
Warar 21 September 2020 9:59
Askarta ayaa caado ka dhigtay iney dilaan dadka rayidka ah.
Warar 21 September 2020 9:48
DFS: Waxaan dilnay xubno ka tirsan Al-shabaab
Warar 21 September 2020 9:33
Axmed Madoobe: Heshiiska la gaaray uma baahna in la geeyo Baarlamaanka
Warar 21 September 2020 9:21